Allah Ayuun Baa Garan Karaya Masiibaddii Ku Dhacday Brazil Koobkii Adduunka – Pele
HomeWararka MaantaAllah Ayuun Baa Garan Karaya Masiibaddii Ku Dhacday Brazil Koobkii Adduunka – Pele
Ruug caddaaga reer Brazil ee Pele ayaa ka hadlay guul darradii, weji gabaxii iyo sharaf dhacee qarankiisa ka raacay koobkii adduunka ee sannadkii hore lagu qabtay wadankaas halkaas oo si bahdilaad ah uu xulka qaranka Germany ugu garaacay 7-1 gool, natiijadaas oo noqotay masiibo aanay cidina filaynin oo dunida ka yaabisay. Guul-darradaasi waxay sababtay in markiiba uu shaqada iska casilo tababarihii xulka qaranka Luiz Felipe Scolari.
Inkasta oo ciyaartaas xulka Brazil ayy ka maqnaayeen labada halbowle ee Neymar iyo Thiago Silva, haddana taasi cudur daar umay noqon karaynin wixii ka dhacay halkaas, waxaana Pele oo ka hadlay uu sheegay in aanay jirin cid adduunyada ku nool oo sharraxaad ka bixin karaysa dhacdadaas bahdilaadda ah.
Isaga wadanka Germany kula hadlayey xiddigaha Thomas Muller, Philipp Lahm iyo Manuel Neuer waxa uu ugu hambalyeeyey reer Bayern Munich guusha 6-1 ay ka gaadheen FC Porto oo ay iskaga hor yimaaddeen ciyaar ka tirsanayd Champions League oo marayey marxaladda siddeedda kooxood. Hambalyada ka bacdi, Pele waxa uu ciyaartooyadaas u sheegay in aanay weli xusuustiisa ka go’in masiibadii xulkiisa Brazil ka qabsatay koobka adduunka.
“Semi-finalkaas ma jiro qof sharraxaad ka bixin karaya. Waxa aanu isku diyaarinaynay, qof kasta oo la weydiiyo Finalka cidda imanaysa xattaa haddii aanu kubadda garanaynin waxa uu odhan jiray Brazil iyo Spain, waxaanay ahaayeen labada laga filayey finalka. Laakiin xulka Germany, laba sannadood ka hor ayaan sii arkay, waxa ii muuqatay in ay aad iyo aad u wanaagsan yihiin. Aad ayay u diyaarsanaayeen” sidaas ayuu yidhi Pele.
Pele waxa kale oo uu isaga oo hadalkiis sii wata yidhi: “Dabcan Masiibo ayaa dhacday semi-finalkii, waxay ahayd wax aanu qofna saadaalin karaynin. Brazil waxa lagaga badin karayey 1-0 ama 2-0, laakiin in lagaga badiyo 7-1 iyo waliba in kaalinta saddexaadna lanagu garaaco 3-0 waxay ahayd wax uu Allah oo kali ahi garan karayey.”
Wixii ka dambeeyey masiibadaas koobka adduunka, waxa xulka Brazil qabsaday tababare Carlos Dunga, kaas oo kooxda isbeddel ku sameeyey isla markaana guuleystay siddeed ciyaarood oo uu qarankiisu ciyaaray intii ka dambaysay koobka adduunka.
Neymar, David Luiz, Thiago Silva iyo Oscar ayaa mar kale waddankooda u xidhan shaadhka, waxaanay xulka dalkooda u hoggaamin doonaan koobka qaaradda Latin America ee Copa America iyadoo ay isku group yihiin Colombia, Peru iyo Venezuela.
Horyaalka Ingiriiska Oo Fasax Gelaya
Celtic: Ganaax Lagu Saaray Garoonkeeda Oo Ay Ka Xidhatay Taageereyaasha Koox La Ciyaaraysay
29/07/2017 Abdiwahab Ahmed